Iwo akanakisa ekugadzirisa madhiri aunogona kushandisa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
La kukanganisa, kana kukanganisa, Icho chiito chakakosha mukuvandudza software, nekuti inobvumira mushambadzi kuti awane zvese zvinokwanisika madhigi mukodhi yake yekodhi. Asi kuti zvikwanisike, zvirongwa zvinozivikanwa sevanokanganisa zvinodiwa, izvo zvinogona kuita kuti basa iri rive nyore kwauri.
Kana uri kugadzira kubva kuLinux chikuva uye iwe unoda kuziva mamwe epamoyo ekugadzirisa zvirongwa, apa ini ndinokuratidza runyorwa nemamwe akanakisa. Saka unogona kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako ...
Rondedzero yeakanakisa debugger
Heino runyorwa ne Wepamusoro gumi weakanakisa ekutsvaira:
GDB (GNU Kugadziriswa): ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye ane simba kuC, kunyanya. Nekudaro, uyu debugger anoshandawo nemimwe mitauro yekuronga senge C ++, Fortran, kana Java. Ehe, inoshandawo pazvivakwa zvakasiyana, senge x86-64, ARM, SIMBA, SPARC, uye MIPI. Saka ndiyo yakanakisa plugin yevagadziri pamwe neGCC.
LLDB: Icho chikamu cheLLVM chirongwa, chimwe chezvakakura kwazvo munyika yekusimudzira uye chiri kuwana mukurumbira. Inoshanda chaizvo uye inokurumidza, uye ndiyo inoshandiswa nekusarudzika mu Android Studio, macOS Xcode, nezvimwe.
Nemiver- Imwewo yakasarudzika-yakapfuma debugger yakanyorwa muC ++. Mune ino kesi, inosanganisira enuitive GUI yekufambisa basa rako kune avo vasingade kushanda mune zvinyorwa mamodheru.
Inopindirana Disassembler kana IDA- Iyo yakasimba bhainari yekuongorora chishandiso iyo inozivikanwa kuti inokwanisa kuwana matambudziko mavari. Iyo inyanzvi yekugadzirisa mhinduro. Uye kune yemahara vhezheni uye yepamberi Pro vhezheni.
Kununura: zviri nyore kwazvo, asi nemabasa mazhinji. Iyo debugger yeLinux yakanyatsogadzirirwa mutauro weGoogle weGo chirongwa.
Xdebug: ine simba debugger yeLinux iyo inoshanda yekodhi yakanyorwa mumutauro wePHP.
KDbg- Zvakafanana neNevimer yeGNOME, iyi imwe GUI debugger chikamu che KDE. Iyo yakapusa GDB-yakavakirwa debugger ine yakapusa graphical interface.
Valgrind- Iri dombo rakasimba debugger, rinopa akawanda ekuongorora maturusi e software. Zvakare, inoshanda pamapuratifomu mazhinji, senge Linux kana macOS.
BASH Debugger kana bashdb: chishandiso chiri nyore kwazvo, asi chinoita basa racho. Iyo inoshandiswa kuongorora Bash zvinyorwa mukati mekuitwa kwavo, uye nekudaro kuona matambudziko anogona kuitika. Zvikasadaro zvakafanana neGDB.
tambo: Uyu murawo wakakurumbira, sezvaunotoziva, asi unowanzo shandiswawo kugadzirisa zvirongwa, sezvo zvichiratidza yakawanda data rinonakidza. Semuenzaniso, kunyora sisitimu yekufona, zviratidzo, zvinotsanangudza faira, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iwo akanakisa ekugadzirisa madhiragi aunogona kushandisa paLinux